Ogaden News Agency (ONA) – Baarlamaanka Itoobiya oo Shuruuc Cusub Ansixayay.
Baarlamaanka Itoobiya oo Shuruuc Cusub Ansixayay.
Posted by ONA Admin	/ July 21, 2018
Barlamaanka Itoobiya ayaa ansixiyay Sharciga cadaaladda, arrimaha maamulka iyo gudiga Joogtada ah.
Sharcigan oo lagu dhisay gudi joogta ah ayaa laga soo kala qaatay shan wasaaradood oo federaal ah iyo laba qof oo Abiye Ahmed magacaabi doono.Wasaaradaha federaalka ee ku jira guddigan ayaa waxaa ka mid ah Xeer Ilaaliyaha Guud, Wasaaradda Haweenka iyo Carruurta, Gudiga Booliiska Federaalka, Maxkamada Sare ee Fedaraalka, Maamulka Xabsiyada Federaalka, iyo sidoo kale laba qof oo uu Abiye Ahmed Soo magacaabi doono.
Gudigan oo s toosa ula shaqayn doona raysalwasaaraha Itoobiya ayaa ilaalin doona saraynta sharciga iyo ku dhaqanka Cadaalada. Sharcigan ayaa si sharci ah u cafinaya dhamaan ururadii shakhsiyaadkii ku eedaysnaa argagixisonimada, danbiyo dagaal ama Jabinta dastuurka Itoobiya.
Waxuu sidookale sharcigani jabinayaa shuruuc loo adeegsan jiran ladagaalanka ururada gobanimo doonka ah oo ku tilmaami jiray ururo argagixiso ah sida Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (ONLF) Jabhada Xoraynta Oromiya (OLF) iyo ururka Amxarada ee Patriotic Ginbot 7 (PG7).
Xukuumada Itoobiya ayaa sanadkan siidaysay kumanaan maxaabiis ah oo ay ku jiraan Dad taliskii horee Itoobiya argagixisonimo u xukumay oo xabsiyada mudo dheer kujiray. Hadaba Siidaynta maxabiistii siyaasadeed ee qaarkood aragagixiso nimada ku xukunaa ayaa waxay ku saleysnayd qodobo cafis ah oon sharci ahayn Balse hada sharci laga dhigay.
Sharcigan shalay baarlamaanka Itoobiya ansixiyay ayaa dhaamaan cafinaya ururadii iyo shakhsiyaadkii siyaabaha kala duwan uxidhnaa waxuuna maanta laga bilaabo noqonayaa sharci ilaalinaya in ururadii iyo shakhsiyaadkii lasii daayay in dib loo xidho.